Candied orenji | Kicheni Mapepa
Ana naAsu Chamorro | | Delicatessen, Mapepa ane Zvibereko, Keke
Hapana chinhu chandinofarira chinopfuura chekake chipanje keke rakagadzirwa necandi machungwa. Icho chinhu chakareruka uye cheupenyu hwese kuti chakakodzera kuti isu tipe nguva shoma yenguva yedu kuti tizive uye tizive kutsanangudzwa kwayo. Tinogona kugadzira iyi yekubheka yemaranjisi uye tovaisa chando mumatanhatu-ne-matanhatu mapaketi. Saka kana zvasvika zvinobatsira mune yekubheka, ndeye kungoiburitsa mufiriji.
Navo isu hatigone kungoshongedza mamwe makeke kana bundu remukaka, kana tisingakwanise kugadzira granola kumba uye kucheka zvidimbu zveorenji kuita mitsetse. Kugadzirira kwayo kuri nyore, isu tinongoda imwe chete yenguva yedu. Pasina kupokana idanho rinogona kushandura chinotapira kuita chimwe chakakosha kwazvo!
munyori: Ana naAsu Chamorro
Kubika nguva: 2 h
Nguva yakazara: 2 h 15 min
400 gr shuga
200 gr yemvura
1 tablespoon yemunyu
Chenesa ganda remaranjisi zvakanaka nebhurashi.
Cheka maorenji kuita zvidimbu zvidiki, asi kwete mutete kana, zvikasadaro vanozotyora kana abikwa.
Muchopu nemvura uye munyu, wedzera zvidimbu zveorenji. Vapike pamusoro pemoto wakadzika kusvikira watanga kubika. Mushure memaminitsi mashanu bvisa kubva pamoto uye utonhorere zvidimbu zveorenji pasi petepi. Maitiro aya akakosha sezvo izvi zvichizobvisa kuvava kubva kuorenji.
Zvino, ngatitangei kuchengetedza maorenji. Muchopu isa 200gr yemvura pamwechete neshuga, uye maorenji. Kuti tivabvumire tinoda kuti vabike kweawa nemaminitsi gumi nemashanu. Saka moyo murefu shamwari makicheni! Famba pano neapo.
Mushure mekunge nguva yekubika yapfuura, isa maorenji pamwe chete nejusi rose kubva mupoto mupoto kana tupperware yatinozoisa mufiriji kwemaawa makumi maviri nemana.
Dzatopfuura maawa makumi maviri nemana! Isa zvidimbu zveorenji pane rakaki kuitira kuti iburitse manyuchi ayo ese, ayo atinofanira kushandisa. Chaizvo zvinonaka!
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Shamwari » Delicatessen » Candied orenji
ChiJapanese keke keke